नजरैले यो हृदय, हरेपछि मेरो के लाग्छ !!
चखेवीले जस्तै माया, गरेपछि मेरो के लाग्छ !!
थाहा छैन मेरै मुटु, खै कसरि उर्वर देखिन् !!
यसै सामु प्रितिबिज, छरेपछि मेरो के लाग्छ !!
अधरमा मुस्कान, र रातो गुलाफ बोकी आइन् !!
प्रणयको दिवसमै, परेपछि मेरो के लाग्छ !!
थाहा छ? उनले पनि, गज़लमै प्रस्ताब कोरिन् !!
शेर शेरमा प्रणय, भरेपछि मेरो के लाग्छ !!
पागलै पो भएँ क्याहो, थाहै नपाई टुक्रिएर !!
आधा मुटु उनीतिरै, सरेपछि मेरो के लाग्छ !!
बाचा गर्नु कता कता, हतार गर्दै जानाजानी !!
सगरका तारा आफैँ, झरेपछि मेरो के लाग्छ !!
Previous गाइने बन्ने लक्ष
Next मुक्तक दोहोरी [पोखरा छोड्दै गर्दा]